DoubleTwist, waafajinta iTunes, sawirrada iyo fiidyowyada Android | Androidsis
DoubleTwist Waa mid ka mid ah codsiyadaas ilaa aynaan haysan waxaynaan garanayn waxa naga maqan. Garaacyo ballaadhan iyada ayaanu awoodnaa waafajinta liisaska muusikada laga bilaabo iTunes ilaa Android -ka, isweydaarsiga muusikada, fiidiyaha ama faylasha sawirka. Waxaas oo dhan adoo si fudud ugu xiraya terminal -ka kombuyuutarka USB -ga iyo dhejinta kaarka Micro SD.
Marka codsiga la rakibo oo la furo, wuxuu na tusayaa tiir dhanka bidix ah halkaas oo aan ku arki karno asalka muusigga, sawirrada ama fiidyowyada ku jira kombiyuutarkeenna; liisaska lagu abuuray Itunes iyo faylasha badan ee warbaahinteena Xarunta Android.
Kaliya adoo ka jiidaya meesha kumbuyuutarkeenna ilaa terminalkeenna, feylasha waa la koobiyeyn doonaa. Xaaladda liisaska la abuuray oo lagu soo guuriyey taleefankeenna, mar kasta oo aan beddelno annaga oo ku darno ama ka saarno qayb kasta liiskan, waxaa la waafajin doonaa kan ku yaal Android mar ku xiran PC.
DoubleTwist Isticmaalayaasha Mac ayaa ka faa'iidaysan kara inta ugu badan, inkasta oo laga soo bilaabo Windows sidoo kale waxaa loo adeegsan karaa iyada oo aan la haysan dhibaatooyin waaweyn, maadaama ay sidoo kale si fiican ula midowdo Iphoto waxayna na tusaysaa liiska dhacdooyinka si ay awood ugu yeeshaan inay ku wareejiyaan sawir kasta taleefanka.
Intaa waxaa dheer, sawir kasta oo ku yaal Micro Sd ee terminal waxaa lagu soo rogi karaa Facebook ama Flickr isla DoubleTwist. Fiidiyowyada ayaa sidoo kale lagu dhejin karaa YouTube.
Hal shay oo sidoo kale xiiso leh, laakiin aanan isku dayin, ayaa ah suurtagalnimada in muusikada lagu iibsado amazonmp3. Ma aqaan haddii laga iibsan karo meel ka baxsan Mareykanka, haddii qof caddeeyo, fadlan faallo ka bixi.
Codsi aad loogu taliyay dhammaan shaqooyinka warbaahinnada badan iyo waliba ogaanshaha inay gebi ahaanba bilaash tahay. Bogga rasmiga ah iyo meesha aad ka soo dejisan karto waa tan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » DoubleTwist, iswaafaji Itunes, sawirro iyo fiidiyowyo Android
aad u fiican, waxaan u jeclahay fududeynta helitaanka waxa aan raadinayo
Ka jawaab lusis gomez